Iijasi zenkqubo yam yakutshanje-iGeofumadas
Gages yenkqubo yam yakutshanje
NgoJuni, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Obu bomi bujongeka njengokuhombiswa okunemibala emininzi yoyilo, yolulwe ziipuli ezimbini ezenziwe ngomthi kanye njengokuba besisenza esikolweni. Isitshixo ngasinye esisinika namhlanje, siba luphawu loyilo olumeleyo kubomi bethu, kwaye ngendlela ngelixa singenzi iqhosha lokugqibela, ayizukugqitywa. Umtya ngamnye unxibelelana nalowo siwenzileyo ngaphambili, komnye umbala, kwelinye ixesha, kwesinye isitayile, kwisithuba esahlukileyo; kwaye iyakudityaniswa nezinye izinto eziza kuthi kungekudala zisikhumbuze ngamaxesha amnandi okanye amabi okudlula kwethu ebomini.
Ngenye imini unjingalwazi kwabo banendlela yobugqi yokutshintsha ilizwe, kodwa ithemba eloneleyo lokuqinisekisa ukuba ilizwe alinakutshintsha okanye indlela yokuphuma ikukuchaneka kwes scalpel kwisandla sasekhohlo, wazisa lo mngeni:
-Ndixelele into enye oyibonayo kobu bomi, ekwenza wonwabe.
Okomzuzwana ndathandabuza, kodwa ndayibamba le nto besele ndiyithethile. Ndimenze wabona iinyani ezilula ezivela kwiveki yesiqhelo ezisa ulwaneliseko olupheleleyo, ukuba sizinikezela ngokwaneleyo kuyo. Okokugqibela, andazi nokuba wayeqinisekile na kuba kunzima ukuthetha malunga nokunambitheka kweorenji kwabo bangazange bakwe. Rekhoda, ndihlala kwilizwe elikuMbindi Merika elisekupheleni kwetafile yobundlobongela, intlupheko nenkohliso.
Andizukutshintsha nantoni na, ndiye kumkhondo weOlimpiki ngolwesiHlanu emva kwemini, nasemva kokuba ndiye ndabuya umvuzo ophindaphindiweyo wezichronrones ezivela eGranja El Carmen, hlala nalo mntu ubone ukuba umsulwa, ukungakhuli, ukuvukela kunye namaphupha khumbula ukuba nam ndingatshintsha izinto ezininzi ukuze ndazi ukuba wonwabile. Kuba iyandonwabisa lonto. Nditsho nabo bayinxalenye yenkululeko yam kunye nothando kodwa oko kungayibeka emngciphekweni.
Nge-13, unamaphupha aya kumenza aphumelele ngaphaya kwale bendiyiyo. Kwaye oko kuyandonwabisa, nangona isekhona iminyaka ecela umngeni ezayo kwaye sele ikwiintsuku apho ebuza khona imithetho, ephakamisa ilizwi lakhe ... kodwa futhi uyangana kwaye athi "Ndiyakuthanda tata.
Emva kokwenza intetho Uvavanyo lwe-geolocation lokubonisa, uye waqiniseka ukuba ungoyena titshala ubalaseleyo kwiNzululwazi yezeNdalo. Nangona evumile nakum ukuba uqinisekile ukuba naye ngokwakhe akazange aqonde notata wale nto, emva kokuba ethe «sonke kufuneka sibe nomdla kwezi khompyuter zisethilini«.
Ngokuqinisekileyo zikho izinto ebomini ezihamba kakubi, kodwa kukuba intombi yakho ifike ikuxelele ukuba iyonwabele ezo yure zimbini zangoLwesihlanu emva kwemini ... ubomi buyatshintsha.
Nangona emfanekisweni ihempe i-plummet iphantsi kwaye kubonakala ngathi ndikhulelwe, ndiyayithanda ifoto, isikhundla kunye noncumo lwakhe.
Yile mizuzu mincinci ebomini esikhumbuza ukuba ubomi bunenjongo. Ungakholelwa, ndinexhala lokuba le ntombazana ineminyaka eli-10 ichitha imizuzu embalwa esipilini kwaye incasa kakhulu izihlangu.
Kodwa ukuhlala ngalo mzuzu kongeza incasa kumagama. Ukuba nayo njengetshungama emqolo wam kwaye ndenza umdyarho weenkamela akuqinisekisi kuphela ukuba andiseneminyaka engama-27 ubudala ...
Ngobusuku bokugqibela siqale iphazili ye-3,000 kwakhona. Nangona umfazi wam eyokucaphuka kwitafile yegumbi lokutyela kangangeeveki ezimbalwa, lixesha lokuba kunye elibaliweyo.
Umama otyelele indlu yam wajoyina kwaye waphantse wavuka esebenza ngomdla athi yena ube nakho ukonwabela kuphela ngoku sele enabazukulwana. Kwaye inkwenkwe iyayonwabela!
NgeCawa emva kwemini, ngelixa bendisitya isaladi emnandi yaseThai eLa Crepería, ndiye ndacamngca kancinci ukuba liphela kangaphi ixesha, ndizisola ngezigqibo esinokuzenza. Kwintombazana leyo eskolweni esingazange sayibona kwakhona, ngenxa yomsebenzi esiwushiyileyo wale sinayo ngoku.
Kwaye oko kunokusenza sichithe ixesha kwizinto esinazo ngoku kwaye ezinokusizisela iziqwenga zovuyo. Nangona singonwabanga ngumgaqo-nkqubo wotshintshiselwano, kuba intsalela yeentlawulo ayilunganga okanye ngenxa yokuba isiVumelwano seBusan siya kuba linyathelo nje elinye ukubonisa ukuba abezopolitiko beli lizwe abanakho ukuyiphumeza.
Ndiyayithanda ilebhile esemnyango wale nguCreperie, ngezantsi komfanekiso okwileta ka-Isabel Allende ethi:
Ndiyazisola ngokutya, izitya ezimnandi ezaliwa yinto engento, njengoko ndizisola ngokwamaxesha wokwenza uthando endiyekile ukulwenza ngokugcina imisebenzi elindelweyo okanye ubuhle bokuziphatha, kuba ukwenza uthando kuyinxalenye yempilo entle, Kukhuthaza indalo kwaye kuyinxalenye yomgaqo womphefumlo ... Ngelishwa kwandithatha iminyaka engama-30 ukwazi!
Izigqibo ebomini, sizenza ngenxa yokuba sithanda oko sinako. Inkumbulo yexesha elidlulileyo bubungqina bokuthungwa komphefumlo. Ayinakuba namandla ngakumbi, kwaye ukuba ayikabikho, inkumbulo injalo.
Izinto ezisenza sonwabe ebomini, kwixesha elide, zezinto esingafanele ukuba sizitshintshe kwindlela yethu yeveki.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Izithintelo zejometri ze12.1
Post Next Ungazi njani ii GeofumadasOkulandelayo »